DOWNLOAD Ruuxa Northrop B-2A AlphaSim FS2004 - Rikoooo
Northrop B-2A Ruuxa AlphaSim FS2004
downloads 10 431
Waayo, FSX/P3D version riix halkan
Litle yaabin of payware hore oo tayo leh laakiin hadda for free! The dalwaddii B-52 leedahay qol iyo caado dhawaaqa dalwaddii. liis sax ah oo la tixraaci karo! Read Readme.txt ah
B-2 Ruuxa Northrop Grumman The (sidoo kale loo yaqaan Qarax qarsoodi ah) waa qarxiyay Maraykan istiraatiiji ah, soo bandhigtay technology hooseeyo qarsoodi arki loogu talagalay cabaar difaaca lidka dayuuradaha cufan, waa inay awoodaan inay la geeyo hub labada caadiga ah iyo nuclear. Qarax waxay leedahay shaqaale ah laba iyo da'a kartaa ilaa siddeetan 500 LB (230 kg) -class bambooyin JDAM GPS-hanuuniyey, ama lix iyo toban 2,400 LB (1,100 kg) bambooyin B83 nuclear. The B-2 waa diyaarad oo keliya in ay qaban karaan hubka waaweyn iswajahaya hawada-to-dusha ku qaabeynta ah qarsoodi.
Horumarinta hore bilowday ka hooseeya "Qarax Technology Advanced" Mashruucan (ATB) inta lagu jiro maamulka Carter ah, iyo qaab ahaa mid ka mid ah sababaha uu u joojiyo oo ka mid ah Lancer B-1. ATB socdey maamulka Reagan ah, laakiin walwal ah oo ku saabsan dib u dhac in ay hordhac u horseeday inay dib u ahaa barnaamijka B-1 iyo sidoo. kharashka Barnaamijka kacay horumarinta oo dhan. Waxaa loo soo saaray oo ay Northrop Grumman oo caawimaad ka helay Boeing, qiimaha diyaarad kasta celcelis ahaan US $ 737 million (doolarka 1997). Total kharashka iibsiga celcelis ahaan $ 929 million halkii diyaaradaha, oo ka mid ah dayactir, qalab, qalabyada, iyo taageero software. wadarta Qiimaha barnaamijka ay ka mid yihiin horumarinta, injineernimada iyo imtixaanka, celcelis ahaan $ 2.1 bilyan halkii diyaarad ee 1997.
Sababtoo ah qiimaha ay caasimadda iyo hawl badan, mashruuca ahaa muranka ee Congress Maraykanka iyo Jamaacadiisa Wadajirka ah ee Shaqaalaha. The fuuli jiray hoos-dagaalkii qaboobaa ee qaybtii dambe ee 1980s ka weyn ayay hoos ugu baahida loo qabo in diyaaradda, kaas oo loogu talagalay in la ujeedka lagu doonayo of cabaar hawada Soviet iyo weerarka diirada u-qiimaha sare. Inta lagu jiro 1980s soo daahay oo 1990s, Congress heysay qorshe hore si aad u iibsato qarax 132 in 21. In 2008, a B-2 ayaa la burburiyay shil yar ka dib duushay, iyo shaqaalaha si ammaan saaray. Wadar ah 20 B-2s sii hawshii la Air Force ee United States.
In kastoo hore ugu horayn loogu talagalay sida qarxiyay a nuclear, ka B-2 markii hore loo adeegsaday dagaalka in ay hoos u bambooyin caadiga on Serbia intii lagu jiray Dagaalkii Kosovo ee 1998, oo arkay sii isticmaalo inta lagu jiro dagaalladii Ciraaq iyo Afghanistan. B-2s ayaa sidoo kale loo isticmaalaa inta lagu guda jiro 2011 dagaalka sokeeye ee Libya. (Wikipedia)
Douglas B-66 baabbi'iyuhu FS2004
Aero Taliyaha 560A FS2004
Beechcraft T-34C Turbo horjoogaha FS2004